အလွန်လူကြိုက်များ bust-up ဖြည့်စွက်ကဘာလဲ? - Je vais vous apprendre comment annuler～clover-movie.jp
အလွန်လူကြိုက်များ bust-up ဖြည့်စွက်ကဘာလဲ?
ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကဲ့သို့မကျေနပ်ချက်များမပါ ၀ င်သောမြင့်မားသောနှုတ်ဖြင့်နှုတ်ခမ်းအဆင့်သတ်မှတ်ထားသောခရင်မ်ကိုရွေးချယ်ပါ။ ဤ site သည်အကြံပြုထားသည့် bust-up creams များနှင့်ပါတ်သက်သည့်သတင်းအချက်အလက်များကိုလည်းဖော်ပြပေးသည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းကိုသင်ကိုးကားထားသောပစ္စည်းအဖြစ်ယုံကြည်စိတ်ချစွာအသုံးပြုနိုင်သည်။ မင်းရဲ့ရင်ဘတ်ဟာတင်းကျပ်လာတာဒါမှမဟုတ်ရင်ဘတ်အောင့်လာတာကိုသင်စိတ်ပျက်မိရင်တောင် acupoints ကိုအင်အားသုံးဖို့အသုံးဝင်တယ်။ Bust-up အပြင်အသားအရေကိုလှပချောမွတ်စေပြီးငုပ်ခြင်းမှကာကွယ်ပေးနိုင်သည်။ acupoints ကိုနှိပ်ခြင်းသည်သင်၏နေ့စဉ်စိတ်ဖိစီးမှုကိုသက်သာစေပြီးအနားယူလိုပါကအကြံပြုသောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်သင်၏စိတ်နှင့်ကိုယ်ခန္ဓာကိုဖြစ်နိုင်သမျှနေရာအနှံ့အပြားနှင့်အပြိုင်အနားယူပါ။ သူကသူမရင်သားကင်ဆာတိုးမြှင့်အိတ်များနှင့်အတူအဆီဆေးထိုးသို့မဟုတ်ရင်သားကင်ဆာတိုးပွားစေချင်ပါဘူးဟုပြောသည်ပေမယ့် “အနည်းငယ်ပိုကြီးရင်သားကြီးထွား!” နှင့် “ခွဲထွက်ရင်သားချင်တယ်!” ချင်သူအမျိုးသမီးတွေအတော်များများရှိသင့်သည် အကယ်၍ သင်သည်ချောမွေ့သောအမျိုးသမီးဟော်မုန်းထုတ်လွှတ်မှုကိုသိရှိပြီးခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိ lymph ဖြန့်ဖြူးမှုကိုမြှင့်တင်ပေးသည့်အပ်စိုက်ကုထုံးအချက်များကိုသင့်လျော်စွာလှုံ့ဆော်ပါက၎င်းသည်အညစ်အကြေးများသာမကလှပသောအသားအရေကိုလည်းပါဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်ကိုကျွန်ုပ်ဝမ်းမြောက်မိပါသည်။ လှပသောရင်သားအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအမျိုးသမီးဟော်မုန်းများအားလျှို့ဝှက်ချက်များကိုမြှင့်တင်ရန်နှင့် lymph သို့မဟုတ်သွေးစီးဆင်းမှုကိုကောင်းစွာဖြစ်စေရန်သတ်မှတ်ထားသော acupoints ကိုအခိုင်အမာဖိခြင်းအားဖြင့်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ Bust-up နည်းလမ်းများစွာရှိသည်ဟုထင်ရသော်လည်းအမှန်တကယ်အောင်မြင်မှုရရှိခဲ့သူများ၏ဇာတ်လမ်းကိုကျွန်ုပ်ကြားရသောအခါအရေးကြီးသောအရာများသည်“ ကိုယ်ဟန်အနေအထား” နှင့်“ massage” တို့ဖြစ်ပြီးအခြေခံနည်းလမ်းများကိုသာအာရုံစိုက်သည်။ ကျနော်တို့ကလုပ်နေတာခဲ့ကြသည်။ အစာတစ်ခုစီ၏အာဟာရမျှတမှုကိုအာရုံစိုက်ခြင်းနှင့်နေ့စဉ်အစားအစာများကိုစဉ်းစားခြင်းအပြင် Lymphatic massage ကိုဆက်မပြတ်မပြတ်ဆက်လက်ပြုလုပ်နေသောကြောင့်၎င်းသည် ၆ လခန့်ကြာပြီးနောက် D ခွက်တစ်ခုဖြစ်လာခဲ့သည်။ အဖြစ်မှန်ကတော့မင်းရဲ့ရင်သားတွေအပြင်ဘက်ကိုမျက်နှာမူနေတယ်ဆိုရင်ချိုင့်ဝှမ်းတွေကိုသန့်ရှင်းနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး၊ သင်သည်မိန်းကလေးတစ် ဦး ဖြစ်ပါကကောင်းမွန်စွာဖွဲ့စည်းထားသောရင်သားကင်ဆာကိုရချင်သည်။ အနိမ့်အဟန့်အတားများနှင့်စူးစူးစိုက်စိုက်စိုက်ကြည့်ခြင်းအနှိပ်နှင့်အစာကဲ့သို့သောသင်၏နေ့စဉ်အသက်တာတွင်အနည်းငယ်ဂရုစိုက်ခြင်းဖြင့်၊ မင်းကိုအိပ်မက်မက်စေပြီးဖြည်းဖြည်းချင်းဖြတ်သန်းစေချင်တယ်။ “ ကျွန်မရဲ့ပခုံးကိုတစ်နေ့ကိုအကြိမ် ၁၀၀ လောက်လှည့်ခြင်း” ၏လေ့ကျင့်ခန်းသည်ကျွန်ုပ်၏ရင်သားများကိုပိုမိုကြီးထွားစေရန်အထောက်အကူပြုကြောင်းကျွန်ုပ်အားပြောခဲ့သည်။ အလှပြင်ဆိုင်တွင်ရောင်းချသောရုပ်တုသည်ဤလေ့ကျင့်ခန်း (ပခုံးလည်ပတ်ခြင်း) ကိုပြုလုပ်ခဲ့ပြီးသူမ၏ရင်သားကိုပိုမိုကြီးထွားစေသည်။ “ မိန်းမရင်သားကိုငါတောင့်တနေတယ်၊ ​​ဒါပေမယ့်ဘယ်တော့မှမဖြစ်နိုင်တဲ့အိပ်မက်တစ်ခု” လို့မင်းကိုစွန့်လွှတ်ဖူးသလား။ အံ့သြစရာကောင်းတာကကြီးထွားမှုကာလပြီးဆုံးသွားတဲ့အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေတောင်ရင်သားကင်ဆာမှာကြီးမားတဲ့ပြောင်းလဲမှုကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ သင်လုပ်သောအစားအစာသည်သင်၏ရင်သားအရွယ်အစားကိုလျှော့ချရန်ဖြစ်သည်။ သို့သော် Lymphatic massage သည်အစားအစာနည်းလမ်း၏စိန်ခေါ်မှုများကိုဖြည့်ဆည်းပေးသည်။ ရင်သားကိုက်ခြင်းနှင့်ရင်သားကင်ဆာတိုးပွားစေသည်။ လူကြိုက်များသော bust-up ဖြည့်စွက်ဆေးများသည်အမျိုးမျိုးသောအကျိုးသက်ရောက်မှုများဖြစ်သောရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေအနေကိုထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့်အရေပြားအခြေအနေတိုးတက်ကောင်းမွန်ခြင်းတို့ကြောင့်၎င်းတို့သည်တစ်ကိုယ်လုံးသန့်ရှင်းရေးလုပ်ရန်အလားအလာရှိသည်ဟုဆိုနိုင်ပါသည်။ “ရင်သားသေးသေးလေးကရှုပ်ထွေးတယ်။ ငါပိုများအောင်လုပ်ချင်တယ်!” မင်းဒီလိုမျိုးတစ်ခုခုလိုချင်လား သီးခြား bust-up နည်းလမ်းများစွာရှိသည်။ ဤနည်းလမ်းတစ်ခုမှာ bust-up ဖြည့်စွက်ဆေးများကိုအောင်မြင်စွာအသုံးပြုခြင်းဖြစ်သည်။